FAQs - Green Camping Products Co., Ltd
tongasoa ny ny orinasa
kitapo matory mpitsoa-ponenana
Envelop matory bag
Neny a sac de couchage
Microfiber lamba famaohana
Tranolay miaramila & kitapo fatoriana
Tsy tantera-drano an-tranolainao?
Na ny lay tsy tantera-drano ihany no mifandraika amin'ny tsanganana ny habetsahan'ny rano ny lamba, ny zava-dehibe indrindra ny famolavolana sy ny hafa. Tsy toa mora, fa maro ny trano rantsan-kazo eny an-tsena no tsy manao izany, na dia voalaza rano 5000mm tsanganana. Misaotra an-trano orana fitaovana fitsapana, izay ho azo tanterahina ny mazava ny orana mba haka an-keriny amin'ny fotoana rehetra, dia hanampy antsika hahita izay mitete mety mba hahazoana antoka antsika ho afaka hamokatra feno trano-lay tantera-drano.
Ahoana no hahatonga ny lay tantera-drano?
Voalohany indrindra, raha tsy tantera-drano ny trano-lay dia tsy hoe fotsiny ho fitaovana mifandray ihany koa fa miankina amin'ny famolavolana sy ny hafa. Alohan'ny toerana ny filaminana, ianao manontany Te tsara kokoa momba izany ny mpamatsy, ary mahazo valiny mazava.
Faharoa, dia afaka manana tarp miaraka amin'ny tranolay ho voatendry mba hahatonga ny lay tantera-drano. Masìna ianao, tsarovy ny hanana ny toromarika miaraka amin'ny trano-lay.
Ahoana no hamantarana ny lay ho an'ny olona firy?
Koa ho ISO5912, misy 2 sokajy ho an'ny trano rantsan-kazo. Category A miaraka amin'ny lanjany tanteraka isan-olona tsy mihoatra noho ny 2.5kg, Category B ny lanjany tanteraka isan-olona mihoatra noho ny 2.5kgs. Fa Category B, ny olona tsirairay dia tokony hanana toerana torimaso tsy latsaky ny 200 X 60cm. Fa Category A, ny fitambaran'ny halavan'ny tsy tokony latsaky ny 195cm, ny sakany amin'ny soroka tokony tsy latsaky ny 58cm amin'ny lohany sy ny tongony toerana tokony tsy latsaky ny 35cm. Raha sarotra ho anao ny hahatsiaro izany, efa ao an-tsaina fotsiny fa ny olona tsirairay dia tokony hanana toerana torimaso tsy latsaky ny 200 X 60cm.
Ahoana ny atao hoe trano lay no afaka?
Voalohany indrindra, dia tokony manaraka ny lalàna Izay ho hamidy, toy ny afo Amerika Avaratra fanoherana ao amin'ny tsena.
Faharoa, raha toa ny rivotra dia ampy. ISO5912 manana ny ara fepetra momba izany. Fa ny lay tokony natao araka ny mari-pana ny tsena isan-karazany.
Fahatelo, ho azo antoka ny trano-lay no mamaritra raha tsy tantera-drano tsy mangataka tantera-drano. Izay no fototra takina fa maro lay tsy hanatanteraka azy io.
Nivoaka Strong, malefaka sy mateza filanjana azy.
Fahadimy, miankina amin'ny tanjona hafa, dia tokony ho hafa famolavolana sy misafidy fanorenana fitaovana hafa. Raha toa ka misy fepetra takiana, dia aza misalasala mifandray aminay.
Izany ve no tokony hampiasa ny dian-tongotra, ny fomba fampiasana ny dian-tongotra?
Dian-tongotra dia afaka miaro ny tranolay gorodona avy maranitra zavatra, toy ny vato amoron-dranomasina, tsatòka. Tsy ny trano-lay mila dian-tongotra.
Raha nanisy dian-tongotra iray eo ambanin'ny trano-lay, ho azo antoka tsy manana ampahany azy ao an-day, fa rehefa avy ny orana, ny rano dia afaka mahazo an-dian-tongotra sy mihazakazaka ambanin'ny ny tranolay sy ny manapotsitra 'ny tany ny trano-lay.
Fantatrao ve hoe firy karazana fanjairana fanorenana ny matory kitapo? Inona no maha samy hafa?
Inona no fanjairana fanorenana ny kitapo fatoriana? Izany ve no mety tsara ho an'ny tanjona? Ve ny mpamatsy nilaza taminareo izay fanorenana no ampiasaina ho an'ny kitapo fatoriana sy ny endri-javatra tsirairay fanorenana? Raha ny mahazatra, dia misy fanorenana 2 samy hafa eny an-tsena, ny H sy ny efi-trano roa sosona H efi-trano.
Ny H ambony dia tsotra sy fanorenana malaza indrindra, manjaitra ny akorany, insulation sy miara-milahatra mivantana. Io fanorenana no matetika ampiasaina ho vanin-taona mafana-lohataona modely
Double H efi-trano , izay malaza indrindra ampiasaina ho an'ny kitapo fatoriana ambany hafanana. Misy 2 samihafa sosona, ny sosona ivelany manjaitra akorany & iray sosona insulation miaraka sy ny sosona anatiny manjaitra soson'ny ary hafa ny sosona insulation miaraka, dia miara manjaitra 2 sosona. Io fanorenana roa H mety kokoa sy tsara kokoa insulation H fampisehoana noho ny efi-trano foana natory kitapo mafana. Rehefa mafana maro insulation fitsapam amin'ny "mafana dummy", hitantsika misy mbola "Mangatsiaka Points", noho izany dia mampihatra ny fanatsarana H fanorenana roa.
Improved double H chamber, as it’s name shows, it’s improved based on double H chamber. The sewing line on double H for both 2 layers are at same level, thermal will loss through these “cold pints”. In order to solve this problem, we designed this improved double H chamber.
Ve ny kitapo fatoriana tantera-drano?
Raha misy olona milaza aminareo fa ny kitapo fatoriana dia tantera-drano, dia tokony handinika raha izy / izy eto amin'ity andalana. Kitapo matory dia tokony TSY tantera-drano, dia tokony ho rano ody sy ny breathable. Raha misy kitapo fatoriana dia tantera-drano, fa tsy breathable manokana ny sasany tena avo lenta lamba. Ny mpanjifa no hatsembohana sy hahatsapa tena tsy mahazo aina.
Manana fitarainana maro ho an'ny zipper olana eo amin'ny kitapo fatoriana, moa ve ianao manana vahaolana?
Zipper fampisehoana Matoria kitapo zipper mikasika ny kalitao sy ny famolavolana matory kitapo. Manana ny zipper amin'ny kalitao tena tsara afa-tsy lany 30-40% ny YKK zipper. Raha misy olona milaza aminareo fa ny zipper tsara, masìna ianao, aza maka fanahy zipper tenany ihany, dia tsara kokoa Te hitsapa ny zipper Matoria kitapo.
Tsy miankina amin'ny kitapo fatoriana isan-karazany sy ny fanamboarana ara-nofo isan-karazany nampiasaina. Aza misalasala aoka hahafantatra raha tianao ny milina washable kitapo fatoriana.
Ve ny fitsangatsanganana bodofotsy dia milina washable?
Manana milina washable fitsangatsanganana bodofotsy, nefa tsy ny rehetra no mashing fitsangatsanganana bodofotsy washable. Mba andefaso olona izahay ho an'ny antsipirihany.
Ahoana no miantoka ny vokatra toetra? Inona no fandrefesana no nalaiko?
Manana fitsipika hentitra ho an'ny fisafoana. Ny fitaovana rehetra dia nandinika sy vokatra vita rehetra dia ho nandinika tsirairay alohan'ny fanondranana. Afaka mahafantatra raha mpamatsy manao maso noho ny vokatra amin'ny alalan'ny fanaraha-maso raha misy tapa misy toerana misy anao. Tsy azo atao fa ny 100% ny vokatra mahafeno ny fenitra.
Ve ny vokatra simika maimaim-poana sy ny tontolo iainana namana?
Indrindra ny vokatra dia namana tontolo iainana. Fa tahaka ny tsena hafa manana takina hafa, azafady jereo aminay ho an'ny antsipirihany. Azonao atao ihany koa Lazao anay fa lasibatra tsena, dia afaka manome ny vaovao mifanaraka amin'izany.
Afaka manolotra ny ambany indrindra ny vidiny eo amin'ny tsena?
Mihevitra aho fa tsy mba ny safidy tsara ianao, raha mifantoka amin'ny vidiny ihany. Afaka manome ny tena fifaninanana vidin'ny vokatra tsara miorina amin'ny famolavolana sy ny vokatra tsara kalitao.
Inona no mba ambany indrindra dia be?
Ny ambany indrindra dia be mba miankina amin'ny zavatra samy hafa sy ny vokatra antsipirihany. Raha ny mahazatra dia avy amin'ny 500pcs ny 2000pcs, misy zavatra bebe kokoa, ny sasany kosa kely. Mba andefaso olona izahay isaky ny zavatra hafa.
Afaka OEM na ODM?
Eny, dia manana ekipa matanjaka fandrafetana. Ny vokatra mety ho vokatra araka ny fangatahanao.
Afaka manome ny taratasy manan-danja?
Eny, tena afaka manome tahirin-kevitra ao anatin'izany Certificates ny Analysis / Conformance; Insurance; Origin, sy ny antontan-taratasy fanondranana izay ilaina.
Inona no mitarika eo ho eo ny fotoana?
Fa santionany, ny fe-potoana dia ny 7 andro. Fa bahoaka ny famokarana, ny fe-potoana dia 45-60 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Ny fe-potoana mahomby raha (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha ny firaka fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, aoka ianareo mba handeha noho ny zavatra takiana amin 'ny tehina izy. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Inona no fandoavam-bola sy ny fandoavam-bola fitaovana?
Fandoavam-bola teny: 30% petra-bola mialoha, 70% fifandanjana manohitra ny kopian'ny B / L amin'ny 10 andro.
Fandoavam-bola fitaovana: TT, L / C, Western Union & Paypal.
Ahoana ny momba ny fandefasana saram?
Ny sambo vola Miankina amin'ny fomba misafidy ny mahazo ny entana. Express no haingana fa koa fomba lafo indrindra. Ny ranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny boky lehibe. Indraindray, lamasinina. Izay indrindra ny tahan'ny tsy ampy entana raha tsy mahalala ny tsipiriany ny boky, ny lanjany ary ny fomba sambo. Mba andefaso olona izahay Raha mila fanazavana fanampiny.
TE hiasa amin'ny US?
Fanorenana 1, beitang orinasa Park, hehai Road, Changzhou, faritanin'i Jiangsu, Sina
Mamorona tranolay vaovao
Ahoana ny fomba hamoronana kitapo fatoriana ho sahaza ...
Ahoana ny famokarana kitapo fatoriana anti-snag
© Copyright - 20108-2020: Zo rehetra voatokana.